Diyo post :: प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने खतरा ! यसरी हुन्छ देउवा सरकारसँग बहुमत प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने खतरा ! यसरी हुन्छ देउवा सरकारसँग बहुमत - Diyo post
प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने खतरा ! यसरी हुन्छ देउवा सरकारसँग बहुमत
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘दुश्साहसी’को अर्को रुपमा परिभाषित गरिन्छ । उनै देउवाले वर्तमान सरकार पुनर्गठन गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन विना नै बहुमत जुटाउने र माओवादी मन्त्रीहरुलाई वर्खास्त गर्ने तयारी देउवाले गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार यो हप्ता भित्रै उनले माओवादी मन्त्रीहरुको बर्खास्त गर्नेछन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा १९ सिट रहेको राप्रपाले देउवा सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि उनी हौसिएका हुन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको समयमा राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुन्ती कुमारी शाह, दिननाथ गिरी र मोहन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारलाई समर्थनको पत्र बुझाएका थिए । कांग्रेस सभापतलाई बुझाइएको बेहोराको पत्र उनीहरुले संसद सचिवालयमा समेत दर्ता गराएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई गृहमन्त्रीको ‘ललिपप’ देखाएपछि थापा सरकारमा आउन लालयीत भएका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी समर्थन फिर्ता भए वा मन्त्री हटाइएपनि राप्रपाको समर्थनमा देउवालाई बहुमत पुग्छ ।
नेपाली कांग्रेससँग २०७ जना सांसद रहेका छन् । राजपा २४, संघीय समाजवादी फोरम १५, राप्रपा १९, राप्रपा प्रजातान्त्रिक १८, फोरम लोकतान्त्रिक १७ गरी कुल ३ सय जना सांसद देउवाको पक्षमा देखिएका छन् । सरकारलाई बहुमतका लागि २९७ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।
उपेन्द्र यादवको चेतावनी
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माओवादी मन्त्री हटाइए आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । फोरम अध्यक्षको यो चेतावनीले भने देउवा विचलित अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।
लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधान स्थानिय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारसँग भेटको क्रममा देउवाले उपेन्द्र यादवको चेतावनीले अफ्टेरोमा परेको बताएका हुन् ।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै यादवको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘हामीले निर्वाचनका लागि तपाईंलाई समर्थन गरेका हौँ । कसलाई हटाउन वा कसलाई मन्त्री बनाउनका लागि होइन ।’
माओवादी मन्त्रीलाई हटाउन गाह्रो
बहुमत आफ्नो पक्षमा देखिएपनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई तत्काल हटाउन सक्ने अवस्थामा देउवा छैनन् । संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण देउवा अहिले निकै अफ्टयारोमा छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलको सुझाव वा सल्लाह अनुसार मात्रै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछन् ।
संविधानको धारा २९८ (९) मा मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा मन्त्रीले लिखित राजिनामा दिएमा, प्रधानमन्त्री स्वयम पदबाट मुक्त भएमा, सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा वा मृत्यु भएमा मात्रै हटाउने व्यवस्था छ ।
तर, माओवादी केन्द्र अहिले तत्काल सरकार नछोड्ने पक्षमा छ ।
देउवाको छिर्के दाऊ
माओवादीले सरकार नछाड्ने र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले समेत सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की दिएपछि देउवा निकै समस्यामा छन् । तर, उनले अन्तिम चरणमा भएपनि माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने स्रोतको दाबी छ । उनले कार्तिक पहिलो साता नै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने संभावनालाई आंकलन गरिएको छ ।
कार्तिक ५ गते हुने मनोनयन दर्तापछि वर्तमान संसद सोतः विघटन हुने र त्यस्तो अवस्थामा माओवादी सांसदले समेत अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने हुनाले अल्पकालिन सरकार गठनको खेल खेल्ने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच वामपन्थि चुनावी तालमेलको घाषणा भएपछि नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा बदलिएको थियो ।
नेपाली कांग्रससँगको सहमति तोडेको भन्दै कांग्रेसले माओवादीमाथि आरोप लगाउँदै आएको छ । एक उपप्रधानसहित १० मन्त्रालय लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र वर्तमान सरकारमा सामेल छ । माओवादी तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्री प्रधानमन्त्री देउवाको बर्खास्तीको शिकार हुनुपर्ने हो भन्दै कुरेर बसेका छन् ।
विश्वकपको उपाधी फ्रान्सलाई, कुन खेलाडीलाई के उपाधी ?
दीयोपोष्ट संवाददाता काठमाडौँ । विश्वकप २०१८ को उपाधी फ्रान्सले प्राप्त गरेको छ । आईतबार राति सम्पन्न भएको विश्वकप २१ औँ ...
पत्रकारको दुई करोड कुम्ल्याएर हिमालय टिभीका साहु बाबु/छोरा भाग्न खोजेपछि बबाल !
काठमाडौं । आठ वर्षसम्म टेलिभिजनको ब्रान्ड स्थापित गर्न श्रम पसिना बगाएका पत्रकार तथा कर्मचारीहरुको पाकेको सुविधासमेत पोको पाकेर हिमालय ...
प्रधानमन्त्री ओलीको भावुक कविता, “म मरे पनि सपना देखिरहन पाउँ”
काठमाडौं, असार ३१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार हिमवत् खण्ड साहित्य कला सम्मिलनको चन्द्रागिरि सिर्जना यात्रामा स्थलगत कविता रच्दै ...
ट्रेड युनियन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य भन्छन्,‘हान र मजदुर संगठनबीचको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियन संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले होटल सञ्चालक र केही मजदुर ...
अछाममा ८ वर्षिया बालिका बलात्कृत !
अछाम–साँफेबगर नगरपालिका–११ देवीस्थानका २१ वर्षीय रेवन्त दासले आठ वर्षीया बालिकालाई पानी माग्ने निहुँमा बलात्कार गरेका छन् । बालिकाका आफन्त रोपाइँ ...
सलमान खानको ‘द ब्याङ टुर’को टिकटमा ठगिनु भयो ? टिकट सहित अपराध महाशाखा टेकुमा जानुस् !
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी अपराध महासाखाले सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने नाममा करोडौं ठगि गरेका पाइएपछि सर्वसाधरणसँग आह्वान गर्ने भएको छ ...
काठमाडौँ, ३० असार । तिलगंगाा आँखा प्रतिष्ठान र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रबीच गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा यही असार २९ देखि ...
भक्तपुरको डुबान बस्तीबाट पाँच टन फोहर संकलन
भक्तपुर, ३० असार । भक्तपुर भएर बग्ने हनुमन्ते नदी सफाइ अभियानको शनिबार २० औं हप्ता मध्यपुरथिमिको डुबान क्षेत्रबाट पाँच टन ...
खलंगामा बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, १६ जना घाइते र ८ गम्भीर अवस्थामा !
रुकुम, असार २९ । रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट–खलंगामा शुक्रबार दिउँसो बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने १६ जना ...